साताको सेयर बजारः १५२ अंकको गिरावट, कुन उपसूचकमा कस्तो असर ? - Arthatantra.com
साताको सेयर बजारः १५२ अंकको गिरावट, कुन उपसूचकमा कस्तो असर ?
काठमाडौं । एक साताको अवधिमा सेयर बजार १५२.७५ अंकले घटेको छ ।
साताको पहिलो दिन आइतबार २७८६.१७ अंक रहेकोमा बिहीबारसम्म आईपुग्दा २६३३.४२ अंकमा रहेको छ । बिहीबार मात्रै बजार ३२.५१ अंकले घटेको थियो ।
आइतबार २७८६.१७ अंक मा रहेको बजार सोमबार घटेर २७०३.३१ बिन्दुमा रोकिएको थियो । त्यस्तै मंगलबार पुन घटेर २६४१.६३ बिन्दुमा रहेको थियो भने बुधबार २६२४.५८ मा रहेको परिसूचक बिहीबार ३२.५१ अंकले घटेर २६३३.४२ बिन्दुमा रहेको छ । यो साता समग्र इन्डेक्स मात्रै नभइर सब इन्डेक्सहरुमा पनि गिरावट देखिएको छ ।
यो सातामा बैंकिङ समूहको उपसूचक ९३.९९ अंकले घटेको छ । साताको पहिलो दिन आइतबार १९६३.९३ बिन्दुमा रहेको उपसूचक बिहीबारसम्म आईपुग्दा ९३.९९ अंकले घटेर १८६९.४० बिन्दु रोकिएको छ ।
बैंकिङ मात्रै नभएर विकास बैंकको उपसूचक पनि ४३३.६९ अंकले घटेर ४७४०.७३ बिन्दुमा रोकिएको छ । साताको पहिलो दिन विकास बैंक समूहको उपसूचक ५१७४.४२ बिन्दुमा रहेको थियो ।
यस्तै जलविद्युत समूहको उपसूचक २३०.८४ अंकले घटेर २८१८.६४ बिन्दुमा रोकिएको छ । आइतबार ३०४९.४८ बिन्दुमा रहेको थियो । माइक्रोफाइनान्स समूहको उपसूचक पनि २४३.५२ अंकले घटेर ४९६२.५७ बिन्दुमा रोकिएको छ । आइतबार ५२०६.०९ बिन्दुमा रहेको थियो ।
जीवन बीमा समूहको उपसूचक पनि ८०२.८९ अंकले घटेको छ । साताको पहिलो दिन आइतबार जीवन बीमा समूहको उपसूचक ८०२.८९ अंकले घटेको छ । साताको पहिलो दिन आइतबार १५ हजार ३७०.१८ बिन्दुमा रहेको उपसूचक बिहीबारसम्म आईपुग्दा १४ हजार ५६७.२९ बिन्दुमा रोकिएको छ ।
अन्य समूहको उपसूचक जस्तै निर्जीबन बीमा समूहको उपसूचकमा पनि गिरावट देखिएको छ । सातको पहिलो दिन आइतबार १२ हजार २८४.०१ बिन्दुमा रहेको उपसूचक बिहीबारसम्म ७४८.७५ अंकले घटेर ११ हजार ५३५.२६ बिन्दुमा रोकिएको छ ।
फाइनान्सको पनि आइतबार २५५९.८५ बिन्दुमा रहेको उपसूचक बिहीबारसम्म आईपुग्दा ३१६.५६ अंकले घटेर २२४३.२९ बिन्दुमा रोकिएको छ । यो साता यी मात्रै नभएर सबै उपसूचकमा नै गिरावट देखिएको छ । पछिल्लो समयमा बजारमा देखिएको अस्वभाविक उतार चढावको असर सबै समूहको उपसूचकमा देखिएको छ ।
वि.सं.२०७८ असोज १५ शुक्रवार १७:५२ मा प्रकाशित
अघिल्लाे १५४ %ले बढ्यो चाँदी आयात, साढे ६ अर्ब बढीको आयात हुँदा ९१ करोडको गहना बाहिरियो
पछिल्लाे सरकार तथ्यांकमा आधारित नीति तर्जुमा गर्ने काममा लागेको छः उपाध्यक्ष डा. पौडेल